IKPAL BRAND-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
I-KPAL Film ivela enkampanini yamafilimu yaseMelika JW. Inkampani yeJW Film ibilokhu izinikele ezintweni zokumboza i-R & D nokuthengisa, amandla ayo obuchwepheshe embonini anokuncintisana okuqinile. Inkampani ithuthukisa futhi ifunde ngemikhiqizo ehlukahlukene engasetshenziswa iyonke, ineqhaza ekuthuthukisweni kwemboni, futhi ithembisa ukudlulisa ulwazi olungcono kumakhasimende anemikhiqizo ephezulu yokusebenza kanye nobuchwepheshe obusekela ezemvelo.
Njengomhlinzeki ohola phambili emhlabeni we-thermoplastic polyurethane (TPU), i-KPAL FILM ithuthukise ukuphela kopende nobuchwepheshe bokuvikela ubuso. I-TPU esebenza kahle ye-KPAL Film isetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene ezifana nomshini wokunamathisela wokunamathisela, imboni yezimoto kanye nesikrini sokubonisa ngogesi, kuyilapho i-KPAL Film nayo ingenye yezinkampani ezinkulu ze-TPU engafakwanga camera nopende ifilimu lokuvikela emakethe yezimoto yomhlaba wonke.
Ngokusebenza okuphezulu, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nekhwalithi enhle yomkhiqizo we-KPAL, i-KPAL Film isibe ngumkhiqizo odumile wefilimu esobala emhlabeni. Kuyo yonke le minyaka, lo mkhiqizo uthwala ukuqashelwa nokwethenjwa kwamakhasimende, ngokuhambisana nesimo sobungcweti esiqinile nesintsha, umqondo wensizakalo egxile kubantu, unethemba lokuba ngumkhiqizo wefilimu wokuvikela upende osezingeni lomhlaba.
Ngemishini emisha yokunemba okuphezulu njenge-SOLT DIE Coating ne-UV-cure, i-KPAL igxile ekuqapheliseni imishini ehlakaniphile nekhwalithi ephezulu ye-PPF.
• I-KPAL ingumkhiqizo owaziwa umhlaba wonke we-Automotive Protection Film, odabuka e-United States.
• I-KPAL inezinhlobonhlobo zemikhiqizo yefilimu evikela izimoto; I-PPF (Paint Protection Film), LPF (Light Protection Film), RPF (Roof Protection Film), WPF (Windshield Protection Film), njll.
• Imikhiqizo ye-KPAL ikhiqizwe ngohlelo oludidiyelwe lokukhiqiza kanye nohlelo lwe-R & D oluphambili. Ubuchwepheshe be-KPAL bungabandakanya ukuhlanganiswa kwe-TPU resin, ukwakha ifilimu kwe-TPU nokwakha amakhemikhali nokumboza okuqondile.
• Ithimba le-TSP (technical Solution Providing) Team lisekela izixazululo ezahlukahlukene zobuchwepheshe ezibandakanya ukufakwa, ukugcinwa kanye nokudutshulwa kwamakhasimende.
I-Ningbo Chem-plus New Material Tec.Co., Ltd yasungulwa
INingbo Chem-plus ithuthukise i-PPF emakethe yasekhaya yaseChina
Inkampani yeJW Film yasungulwa
I-KPAL brand brand yasungulwa
I-PPF yefilimu i-KPAL iqale ukuthunga amakhasimende aphesheya kwezilwandle